Ngaba kunokwenzeka ukuthenga i-GOV backlinks?
Xa kuziwa kwi-backlink ezinamandla kakhulu kwiiwebhusayithi zeburhulumenteni kunye namaphepha eblogi, nantsi into enye kufuneka uyiqonde kuqala. Into kukuba awukwazi ukuthenga i-backlinks ye-GOV, unokufumana kuphela. Yingakho ngaphantsi ndiza kukubonisa inkqubo yokufumana ezi zinto ezixabisekileyo zokusebenzisa i-backlinks kwiindlela ezininzi zokusetyenziswa-ndlela ndivavanywe kwiwebhu. Yaye loo nto yayiza kuba ngumsebenzi ochanekileyo wexesha, ndifanele ndivume. Kodwa usenakufuna ukunandipha igunya labo elinamandla, akunjalo? Ngoko, yindlela onokuyithenga ngayo i-GOV backlinks - utyalo nje ixesha lakho kunye nemigudu kwelinye la ndelayo: ukubeka izimvo kwiibhulogi zorhulumente, ukubhala malunga neziko likarhulumente okanye amanye amanyathelo ahambelanayo, udliwano-ndlebe kwilungu okanye ilungu lomphakathi, ukwakha iphepha lovimba, kunye nokuqhaqhazela ngesibindi ukuze ufumane i-backlinks efanelekile ngokubuyisela. Ngoko, makhe sihlole imeko nganye ekwazi ukuvumela uncedo lokuthenga i-GOV backlinks - ukuhlawula ngokusebenza kwakho.
Ukuphawula kwiibhulogi zikaRhulumente
Ukushiya izimvo kwiitrogi ze-GOV ziphakathi kweendlela eziqhelekileyo zokufumana i-backlinks. Kuninzi nje ukuphawula kwenye indawo kwi-Intanethi, nangona kunjalo, umsebenzi awuyinto elula njengoko kukhangeleka kuqala. Inye into yokuba isabelo seengonyama ze-website ezinxulumene nazo azivunyelwe ukubeka izimvo, okanye ubuncinci banokuthi banikeze kuphela i-backlinks kuphela. Ngoko, kuya kufuneka uchithe ixesha elide ukufumana abaviwa abalungileyo ukufumana izixhumanisi zengxelo. Leyo yakuba ngumsebenzi onzima kakhulu apha.
Ukubhala malunga neZiko okanye iQumrhu elichaphazelekayo
Yenza ingqalelo ngakumbi kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi - bhala inqaku elincinane malunga neziko likarhulumente okanye iqumrhu layo elihambelanayo. Unokubhala ngokubhekiselele kwipolitiki - udliwano-ndlebe ilungu le-arhente, okanye impembelelo enkulu yoluntu nayo iyindlela ebonakaliswayo yokubamba ezinye izinto ezixhasayo.Ngokomzekelo, ukudala i-article ye-niche okanye ingxoxo kwiCandelo lezeMandla liya kuba yisigqibo esenziwe kakuhle kwizo zakhiwo zomelelekileyo zamandla, umatshini okanye ukubandakanyeka nakweyiphi na enye imbambano kunye kunye nethi. Abo benzayo, ngokomzekelo, kunye nekhemistri okanye i-pharmacy banokufumana umlinganiselo ogqithiseleyo kunye neMibutho yoKhuselo lokusiNgqongileyo, okanye iMibutho yezoLimo ephantsi koorhulumente.
I-Arhente ye-Arhente okanye ilungu lezentlalo
Njengawo ndlela yangaphambili, udliwano-ndlebe nompolitiki okanye abachaphazelekayo abachaphazelekayo kunye nethuba elihle lokufumana i-backlinks zikarhulumente. Yonke into oyifunayo apha kukuxelela umntu oxoxwa naye udityaniswe kwaye yonke into isungulwe kusengaphambili - ngaphambi kokuba uqale ukusebenza kulo nqaku elixabisekileyo kwaye ekugqibeleni ufumane unxibelelwano kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Isicatshulwa: cinga ukukhetha nawuphi na umthetho osandululweyo olindelekileyo ukuba uphumelele kwiprojekthi yakho ye-intanethi okanye ishishini lonke.
Ukwakha Ikhasi leZibonelelo
Ngokuxhomekeka kwi-niche, ukwakha iphepha lovimba ngamanye amaxesha lingaba sisisombululo. Ndinezinye iimeko, ngokomsebenzi wendawo, qwalasela ukudala iphepha lokuncedisa ukubonelela ngolwazi olusebenzayo malunga nomthetho wendawo okanye imimiselo esemthethweni eya kuba luncedo kubasebenzisi basekhaya. Kwakhona, cinga ukuba udweliswe kumaphepha athile asele asele anamaphepha amaninzi karhulumente.
Emva koko, ukubethelwa ngokucwangcisa kuhlale kuqinisekisiwe kwaye kuqinisekiswe indlela yokuthenga i-GOV backlink kumaziko karhulumente. Yonke into oyifunayo kukuba ufumane ubunzima bokubaluleka kokubaluleka kwamanje-kwaye uvakalise nje ngomxholo wakho kanye noko bafuna ukukuva. Ngokuqinisekileyo, kufuneka ube neenjongo zangempela-kwaye ukhuthaze isiqulatho sakho somxholo ngokuqhubekayo njengoko unako Source .